सम्झनाको यसरी लिइएको रहेछ ज्या,न, प्र,हरीसंग राजेन्द्रले दिए यस्तो व,यान,तपाईं के भन्नुहुन्छ नी? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सम्झनाको यसरी लिइएको रहेछ ज्या,न, प्र,हरीसंग राजेन्द्रले दिए यस्तो व,यान,तपाईं के भन्नुहुन्छ नी?
काठमाण्डौं ।१२ बर्षिया बालिका सम्झना कामीको ज्या,न लिएको आ’रो’प लागेका राजेन्द्र बोहोराले अन्नत घ,टना स्वी,कारेका छन् । बझाङ जिल्ला, मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाका राजेन्द्र बोहराले घ,टना स्वीकार गरेका हुन् । उनले गत हप्ता सोही ठाउँकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको ज्या,न लिएका थिए । त्यही दिन प,क्राउ परेका बोहराले आठ दिनपछि बुधबार प्र,हरीसामु घ,टना स्वि,कारेका हुन् ।
श,व बुझ्दै उनका आफन्त गोरख कामीले दो,षीलाई का,रवाही हुन्छ भनेर श,व बुझेको र अ,दालतबाट फै,सला नहुँदासम्म सम्झनाको न्या,यका लागि सं,घर्ष गरिराख्ने बताए । मङ्गलबार जिल्ला प्र,शासन कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा समेत बालिकाको श,व बुझ्ने सहमति भएको र गृ,ह मन्त्रालयका सचिवले फोनमार्फत बालिकाका आफ्न्तलाई रु १० लाख दिने बताएको सहायक प्र,मुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर सार्कीले जानकारी दिए । ताजाखबर बाट
Previous ‘अनसन फिर्ता लिएर कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाईंमा जोडिनुस्’ भनी सरकारको डा. केसीलाई यस्तो आग्रह !
Next सिन्धुलीगढीलाई पर्यटकियस्थलका रुपमा विकास गरिने मन्त्री भट्टराई,होला त विकास? हेर्नुहोस।